ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ကြာနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆများနှင့် အသုံးပြုပုံများပြင်ဆင်
မြန်မာမင်းတို့၏ ကြာနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆနှင့် အသုံးပြုပုံပြင်ဆင်
ရာဇာဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်းလာ ကြာနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆများပြင်ဆင်
အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ရှိ ကြာနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆများနှင့် အသုံးပြုပုံများပြင်ဆင်
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၅၅)။ "ကြာ"။ in မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၂ (ပဌမအကြိမ် ed.)။ ဟေဇယ်၊ ဝပ်ဆင်နှင့် ဗိုင်းနေး လီမီတက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ အင်္ဂလန်။: စာပေဗိမာန်။
၁၉ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။